भागबण्डामा राजदूत नियुक्ति भएपछि यस्तो आयो युएईबाट प्रतिक्रिया - Ratopati
युएई– नेपाल सरकारले भागबण्डाका आधारमा राजदुत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि विदेशी भुमीमा रहेका नेपालीहरुका समस्या समाधान नहुने युएईमा रहनेहरुले बताएका छन् ।
हालै सरकारले युएईलगायत १४ देशका लागि राजदुतहरुको नाम सिफरिस गरेको थियो । तिमध्ये आशा लामा युएईका लागि सिफारिस भएकी छन् ।
अनुमानित ३ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार रहेको मध्यपुर्वी देश युएईका लागि लामालाई राजदुतमा सिफारिस गरिएको छ । उनलाई काँग्रेसको कोटाबाट सिफारिस गरिएको हो ।
लामालाई राजदुत सिफारिसपछि समाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।
मुलतः उनी बैदेशिक रोजगार व्यवसायी भएको र उनीबाट नेपाली मजदुरहरुका समस्यासम्बोधन हुन नसक्ने धेरैको प्रतिकृया रहेको छ । युएईमा रहेका नेपाली कामदारहरुका धेरै समस्याहरु छन् ।
त्यसमा म्यानपावर व्यावसायीको लापरवाही, अध्यागमनको सेटिङ, श्रम स्विकृती लागतयका विषय र भिजिट भिषा मुख्य समस्या हुन् ।
यस्तो अवस्थामा भर्खरै सरकारले युएईका लागि सिफारिस राजदुतकाबारेमा युएईमा क्रियाशिल विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र प्रमुखहरुसँग रातोपाटीको लागि लक्ष्मण खनालले कुराकानी गरेका छन् ।
सुदिप कार्की, एनआरएन युएई अध्यक्ष
राजदुत नियुक्तीजास्तो संवेदनशील कुरामा राजनैतिक भागबण्डा गरिनु हुदैन । यस्को म खुलेर विरोध गर्छु । यो गलत परम्पारा हो । यो प्रबृतिले गर्दा सक्षम व्यक्तित्वहरु पाखा लाग्ने र राजनैतिक विचार बोकेकाहरुले अवसर पाउने हुन्छ । जसलाई परराष्ट्रनीति के हो ? नेपालीहरुका समस्या के हुन ? भन्ने ज्ञान नै हुदैन उनीहरुलाई राजनैतिक आधारमा जिम्मेबारी दिएर कसरी नेपाली मजदुरहरुको हकहितमा काम होला ?
अझ म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदुत बनाएर पठाउन अहिलेको सरकारले सिफारिस गरेको छ । एकातर्फ सोच्ने हो भने म्यानपावर व्यवसायी मजदुरका समस्याहरुमा जानकार त हुन्छन । बैदेशिक राजेगारीका जटिलता उनीहरुलाई जरै थाहा हुन्छ । त्यसमा उनीहरुको नियत सफा हुनसक्दैन । यदि उनीहरु इमान्दार भएनन् भने उनीहरुको व्यवसाय फस्टाउने बाहेक अर्को केही काम हुनेछैन । अहिले नियुक्त राजदुतबाट त्यती धेरै समस्या समाधानका आशा गर्न सकिदैन ।
श्याम कँडेल, अध्यक्ष प्रवासी नेपाली मञ्च युएई
सरकारले भर्खरै सिफारिस गरेको राजदुतहरुको सुचीलाई हेर्दा सत्तारुढ दलहरुलाई यो भागबण्डाले राम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त भएको प्रष्ट देखिन्छ । न्यायाधीशदेखि सवै उच्च ओहोदामा राजनीतिक भागबन्डा हुने भएकालेसोझा जनता विदेशी भुमीमा भौतारिनु परेको हो । लोकतन्त्र भनेकै यस्तै मनलग्दीतन्त्र रहेछ । सरकार जनतालाई सेवा दिने भन्दा पनि राजदुत नियुक्ति गरि सत्तारुढ दललाई खुशी बनाउदै सत्ता लम्व्याउन तल्लिन छ । स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिले मोटो रकम दिएर उच्च ओहोदा लिन चाहदैनन, त्यसैले स्वाभाविक रुपमा व्यवसायिक व्यक्तिहरु सिफारिस हुन्छन । व्यवहारिक रुपमा हेर्नेहो भने लामो समयसम्म सरकारी कर्मचारीको रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरु व्यवसायी भन्दा धेरै पोख्त छन् भने तिनै कर्मचारीहरुलाई राजदुत बनाउँदा सबैको अपनत्व हुन सक्दथ्यो ।
अब त नियोगहरुमा नेपाली भएर पनि सेवा लिनको लागि राजनैतिक पहिचार वा राजनैतिक आस्थाको साहारा लिनुपर्ने बाध्यता आउने भयो । सेवाग्राहीले काम दिन पनि म तपाइको पार्टीको कार्यकर्ता हुँ भन्नु पर्ने आवस्था आयो । राजदुत देशको प्रतिनिधित्व गरेर आउने कुटनैतिक मर्यादा बस्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ । सबैको साझा हुनुपर्दछ । देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र कुटनैतिक क्षेत्रमा दख्खल भएको व्यक्तिले मात्र कुशलतापुर्वक मर्यादित ढंगले राजदुतको कार्यसम्पादन गर्न सक्दछ । राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण समेत नलिएर व्यक्तिगत प्रभचवमा राजदुत जस्तो गरिमामाय पदमा अयोग्य व्यक्ति सिफासिर हुनु राष्ट्र र प्रवासी नेपालीहरुको लागि दुर्भाग्य हो । युएईमा बैदेशिक राजगार व्यवसायीलाई राजदुत सिफारिस गरेकोमा यहाँका नेपालीहरुको व्यापक विरोध आइरहेको अवस्थामा विरोधको पुर्ण सर्मथन गदै सरकारले अविलम्ब निर्णय पुर्नविचार गरोस् भन्ने जोडदार माग छ ।
हेमन्त पौडेल, अध्यक्ष नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च युएई
जसरी कोटा मिलाएर राजदुत सिफारिस भयो त्यसमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु स्वच्छ छवि भएका हुनु पर्नेहो । मुलतः हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रले यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिएर राजदुत सिफारिस गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेको व्यक्तिलाई प्रधानतामा राख्ने भन्ने नै पोलिटव्युरोले निर्णय गरेको थियो । तर हिजो युएईको लागि र ओमनको लागि सिफारिस गरिएका राजदुतको विषयमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन । उहाँहरु म्यानपावर व्यवसायी हो भन्ने प्रश्ट भइसक्यो । युएईको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट सिफारिस भएकी आशा लामा म्यानपावर व्यवसायी नै हो वहाँ विभिन्न समयमा युएईमा आएर विभिन्न भिषा खोज्ने गरेको खुल्न आएको छ । जसको कारणले उहाँको छवि जस्तो स्वच्छ भएपनि बैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुनुले ठुलो आशा गर्न सकिदैन ।
समाजिक रुपमा उहाँको राम्रो छवि छ समाजिक सेवा गर्दै समस्यामा परेको नेपालीहरुलाई उद्दार गरेर विदेश पठाउने गरेको भन्ने तर्क पनि आएको छ । अब विगतलाई भुलेर उहाँले श्रमजिवि नेपालीको पक्षमा वकालत गर्नु भयो भने हामी उहाँलाई सहयोग गर्दै जानेछौ । जनजाति र महिला हुनुको नाताले शुभकामना दिदै व्यक्तिगत लाभ छोडेर नेपालीको हितमा अगाडी बढे उहाँको कार्यकाल सफल हुनेछ ।
उत्तम अधिकारी , संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज युएई
सरकारले विभिन्न देशको लागि राजदुत सिफारिस गरेसंगै समाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आउन थालेको छन् । युएईमा रहेको नेपाली दुतावासले पनि लामो समय रिक्त रहेको राजदुत पदको लागि सिफारिस भएको छ, त्यसैले युएईमा राजदुत सिफारिस बहसको विषय बनेको छ । हाम्रो समाज लामो संघर्षबाट पञ्चायतलाई परास्त गर्दै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि हाम्रा नेतृत्वहरुमा विचार र संस्कारमा कुनै परिवर्तन नदेखिनु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । यही नै नेपाली जनताहरुलाई विद्यमान राजनैतिक पार्टीहरुप्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न गराउने मुख्य कारण हो ।
खुला प्रतिस्प्रधाको अबधारणा मार्फत हामीले राजदुत नियुक्त गर्न नसक्नु र नचाहनु , क्षमता दक्षता र सम्बन्धित ज्ञानको मुल्यांकन नगरी गरिने यस्ता काम सधै विवादित हुने गर्दछन । त्यसैको निरन्तरता अहिलेको राजदुत सिफारिस हो भन्दा अत्यायुक्ति नहोला । मुख्य कुरा दुइ देशको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण पनि राजदुतको हातमा हुने हुँदा पार्टिगत भागबन्डाको आधारमा र सम्बन्धित व्याक्तिको पृष्ठभुमीलाई पनि ख्याल नगरी नियुक्ति गरिदा भोली यसले दिने परिणाम राम्रो हुन सक्दैन भन्ने आम नेपालीको बुझाइ नाजायज होइन ।
डेर राज तमु, अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जानजाति महासंघ
नेपाल सरकारले युएईको राजदुतका लागि सिफारिस गरेको विषयलाई म र मेरो संस्थाबाट स्वागत गर्दछु । युएईको लागि आशा लामालाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको छ उहाँ एक आदिवासी जनजाती अभियान्ता पनि हुनुभएको र नेपाली दुतावास युएईको इतिहासमा पहिलो महिला राजदुत पनि सिफारिस भएकोमा हामीलाई गौरब महशुस भएको छ ।